Taarikada Gaadiidka Somaliland Oo Markii Ugu Horraysay La Badelayo – somalilandtoday.com
Taarikada Gaadiidka Somaliland Oo Markii Ugu Horraysay La Badelayo
(SLT-Hargeysa)-Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland Cabdilaahi Abokor Cismaan ayaa sheegay in dhawaan la bedeli doono taarikadda ama blade numberka gaadiidka kala duwan ee Somaliland. Wasiir Cabdilaahi ayaa sheegay sababta loo bedelaayo taarikada gaadiidka Somaliland gaar ahaan gawaadhida ay tahay si loo yareeyo kordhka xooggan ee ku socda tirada blade numberka la bixinaayo.
Wasiirku waxa uu sheegay in dukaamadda iibiya qalabka gaadiidka kala duwan ay cabasho badan ka mujiyeen gaadiidka badan ee dalka imanaya iyo taarikadda kuwaasi oo noqday xad ka bax. “Waxaanu idiin ballan qaadaynaa in aanu dhawaan beddeli doono sumada gaadiidka, taasi oo dhimi doonto tirada badan ee gaadiidka ee ordaysa. Maanta waxaynu ku dhow nahay maanta in ay gaadiidkeennu gaadhaan 100 kun, numbers ayaa lagu iibiyaa. Gaadhigii laguma iibiyo quality ‘tayo’ iyo model ‘nooc’. Gaadhigii 20 jirka ahaa iyo gaadhigii 5 jirka ahaa qiimo waxa u sameynaya waa numberka ‘sumadda gaadhiga’ waxaan is leeyahay waa arrin aan wanaagsanayn, oo ay weliba sabab u yihiin nimankan dilaaliinta ah, waxaanu jecel nahay si aanu taas uga hor tagno bisha soo socota in ay inoo dhaqan geli doono numberro cusub ‘blade numbers cusub’ oo u qeybsanaan doono gobolo iyo xuruuf.” ayuu yidhi wasiir Cabdilaahi.
Cabdilaahi Abokor wasiirka gaadiidka iyo jidadka Somaliland waxa uu sheegay oo kale in keliya wasaaradda gaadiidku ay awood u yeelan doonto gaadhi kasta oo Somaliland yimaada wakhtiga uu soo galay dalka. Wasiirku waxa uu intaasi ku daray in bulshada Somaliland hadda kadib aanay gaadiidka ku iibsan doonin numberkiisa ‘taarikadda ku xidhan’ ee ay ku iibsan doonaan gaadiid walba tayadiisa iyo nooca uu yahay.
Wasiirka gaadiidka ayaa hadalkan ka jeediyey munaasib ay magaalada Hargeysa ku qabatay shirkadda Perto Min. Waa markii ugu horeysay ee wasaaradda gaadiidka Somaliland ku dhawaaqday in ay wax ka bedel ku sameyn doonto sumadda gaadiidka dalka – si loo helo gaadiid tayo leh iyo in la yareeyo korodhka xooggan ee ku socda gaadiidka dalka imanaya.